StaFi Protocol ya na Liqee. Protocol StaFi nwere obi ụtọ ịkpọsa… | by Emmanuel Ramsey | Medium
Protocol StaFi nwere obi ụtọ ịkpọsa mmekorita ha na Liqee, iji wepụta ngwaahịa agbazinye rToken yana ime ka netwọkụ na akụ ha dabara nke ọma na ibe ha.
StaFi Protocol na Liqee ga-arụkọ ọrụ ọnụ dị ka otu iji webata rTokens, gụnyere rETH/rATOM/rDOT, n’ime ikpo okwu ịgbazinye ego nke Liqee, ka e wee jiri ihe ndị a dị n’elu 3rToken dị ka ihe nkwekọrịta iji gbazinye akara ngosi obodo dị iche iche na mkpụrụ ego kwụsiri ike.
Liqee ga-akwado StaFi’s rToken dị ka ihe mbụ nke akụ na mmalite, na-enye ndị ọrụ ohere ịgbazinye ihe akaebe nke stake (PoS) akụ (ya bụ, nye rDOT iji gbaziri DOT) ma ọ bụ mint USX (USX dollar pegged stablecoin malitere site dForce) megide rToken. Enyere Liqee ka ọ bụrụ ihe nkwekọrịta. Liqee na-enyekwa tokenization maka PoS na akụrụngwa na-egwupụta akụ, yana ọrụ staking PoS gafee ọtụtụ netwọkụ.
Ihe ndị a na-emepe atụmatụ nke mmekọ a
Enwere ike iji rTokens dị ka ihe nkwekọrịta na liqee
Site na Liqee, ndị na-ejide rToken nwere ike itinye rTokens na Liqee ka ha gbaziri ETH, ATOM, DOT na USX(mkpụrụ ego kwụsiri ike nke dForce nyere) iji nweta ego na-ereghị na DEX ma ọ bụ mgbapụta.
Nke a ga-agbasawanye oke mmiri nke rTokens, si otú a na-emeziwanye nnabata nke ihe nrụpụta StaFi.
leveraged Liquid staking na-abịa
Ebe enwere ike iji rTokens dị ka nkwekọrịta na Liqee, ndị ji rToken nwere ike iji Liqee kwalite ụgwọ ọrụ ha site na iji leveraged liquid staking (LLS) n’ọdịnihu.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ onye njide reETH, ị ga-enweta ihe dịka 6% APR site na ụgwọ ọrụ nke netwọk staking ETH2.0. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite APR staking, ị nwere ike itinye rTokens gị na Liqee iji gbazite ETH, wee tinye ETH nke agbaziri n’ime ngwa StaFi rETH iji nweta akara ngosi reETH, nke pụtara na rETH Holdings gị na-agbago na ụgwọ ọrụ gị APY na-abawanye. ịdị gburugburu 10% na otu ụkpụrụ.
Ọzọkwa n’ihi na ọnụego mgbanwe nke rETH/ETH na-adị n’elu 1 mgbe niile, ọ ga-eji nwayọọ nwayọọ na-abawanye, ya mere ihe ize ndụ nke mmiri mmiri adịghị adị na naanị 70% Liquidation LTV ratio.
Mgbasa nkwado nkwado na liqee
A ga-ewepụta ikpo okwu Liqee n’elekere 12:00pm UTC, 27 Ọgọst 2021, a ga-enwekwa nnukwu mgbasa ozi na-akwado mkpụrụ akụ maka itinye rTokens na ịgbazinye akara ndị ọzọ (gụnyere akara ngosi obodo na mkpụrụ ego kwụsiri ike).
Ọ bụrụ na ndị ji rToken sonye na mkpọsa a nwere ike nweta ụgwọ ọrụ okpukpu atọ nke gụnyere akụkụ atọ ndị a:
Pool ụgwọ ọrụ LQE Token
Ọdọ mmiri StaFi FIS Token ụgwọ ọrụ
dForce DF Token ụgwọ ọrụ
Nọrọ na nche maka nkọwa nke nnukwu mkpọsa a, nke a ga-ewepụta ngwa ngwa.
Ụgwọ ọrụ “okpukpu abụọ”.
Ebe ọ bụ na a na-ewepụta rTokens mgbe ndị ọrụ kwuchara, ndị ọrụ nwere ike nweta ụgwọ ọrụ “okpukpu abụọ” na Liqee:
Ụgwọ ọrụ ugbo nke mmiri mmiri gụnyere akara LQE, FIS na DF, mgbe ị na-edobe rTokens na ibiri akụ ndị ọzọ.
Ụgwọ ọrụ nkwụghachi ụgwọ nke PoS na-ebute site na ijide rTokens.
Na-enye akụrụngwa nwere mmasị ọhụrụ maka Liqee
Liqee nwekwara ike ịnye ndị ọrụ ya akụ na-enye ọmụrụ nwa ọhụrụ, wee bụrụ usoro ịgbazinye ego izizi nke apụrụ iche maka ihe nrụpụta, nke bụ nnukwu ihe ọhụrụ na oghere DeFi.
Liqee bụ ahịa ịgbazinye ego nke mbụ n’ụwa maka akara mmiri staking (PoS staking tokens, DeFi staking tokens, wdg) ma kwadoro ya site na dForce’s ịgbazinye protocol, nke ndị ụlọ ọrụ nyocha zuru ụwa ọnụ anọ na-enyocha gụnyere Trail of Bits, ConsenSys Diligence, CertiK, Certora. Anyị na-agba mbọ ka ị bụrụ usoro ịgbazinye ego kacha ukwuu maka akara ngosi mmiri mmiri na ọnụ ụzọ jikọtara ọnụ maka ahịa ahịa mmiri mmiri. Liqee na-enyekwa tokenization maka PoS na akụrụngwa na-egwupụta akụ, yana ọrụ staking PoS gafee ọtụtụ netwọkụ.
Maka ịmatakwu gbasara Liqee lelee njikọ dị n’okpuru
Banyere StaFi Protocol
StaFi bụ protocol DeFi izizi na-emepe oke nke akụ etinyegoro. Ndị ọrụ nwere ike ị nweta akara ngosi PoS site na StaFi wee nata rTokens na nkwụghachi, nke dị maka ịzụ ahịa, ebe ha ka na-enweta ụgwọ ọrụ. rToken bụ ihe nrụpụta sịntetik staking na-enye ndị ọrụ mgbe ndị ọrụ na-enweta akara ngosi PoS site na ngwa StaFi rToken. A kwụgidere rTokens na akara ngosi PoS nke ndị ọrụ nwere na ụgwọ ọrụ staking kwekọrọ. Enwere ike ibufe ma zụọ ahịa rToken n’oge ọ bụla.
Ngwa rToken: https://app.stafi.io
Mkparịta ụka Telegram: https://t.me/stafi_protocol
Ozi Telegram: https://t.me/stafi_ann